Ngopha emakhaleni - into lalivamile. Ngo ngokwayo akuyona isifo, kodwa uphawu abaphumeleli. Ngakho impendulo yombuzo othi "Kungani ngopha emakhaleni," ngokuvamile kufanele sibheke bonke ekhaleni.
Esinye sezizathu ezivame kakhulu ngopha emakhaleni e abadala - kuphezulu blood pressure. Ngokuvamile Lokhu kuluphawu zokuqala ekuthuthukiseni nomfutho wegazi ophezulu. Uma ukopha kwenzeka ngokuphindaphindiwe futhi ephelezelwa ikhanda, igazi tinnitus, kubalulekile ukulawula izinombolo of wegazi kanye esimweni amagugu ephakeme ukuze uqale ukwelashwa nomfutho wegazi ophezulu.
Isizathu ezenza kube ngopha emakhaleni, kungaba ukudla, ukuthi ihlobene ukudla. Lokhu kwenzeka lapho indikimba siyenzeka ukuntula hypo- namavithamini noma cha, isb entula amavithamini C no E (ascorbic acid kanye rutin) yi izitsha .Ngo babe ziyaqothuka futhi ukopha kwenzeka ikakhulu ekhaleni. Ngokuvamile lokhu kuhambisana nokubuka ngopha emakhaleni, hhayi kuphela, kodwa futhi kusukela izinsini lapho uxubha amazinyo futhi kungaba sesizini (ebusika - entwasahlobo), lapho Vitamin akuyona ayindlala ikakhulukazi. Ngokulandelana, futhi ukuqeda lesi simo ulula - ukuqala ukuthatha amavithamini ulahlekile. Lokhu kumele kwenziwe kahle ngesimo ngomthamo, njengoba ukugcwala ukushoda yabo izithelo ngalesi sikhathi sonyaka kuyinkinga - ngokwazo okuqukethwe lamavithamini ewa kakhulu.
Ephambi kwezinduna amakhala yisisu (rhinitis), ikakhulukazi esingamahlalakhona noma sinusitis bazibuze ukuthi kungani lo umongozima, akudingekile. Impendulo kwamanzi - yimuphi ukuvuvukala kuholela permeability semithambo, okuyinto kulula ziyaqhuma ukopha kwenzeka. Kulokhu, balahle ukopha yansukuzonke ungenziwa kuphela ukwelapha lesi sifo, basuke ukugqugquzela.
Izingane umongozima kungenzeka umane ngenxa izici ezithile yokwakheka lapho krovonesuschie nezitsha sisondele kakhulu ebusweni mucosa acinene, lesi sifo okuthiwa lobuthakathaka Kisselbaha esishintshashintshayo. Uma ukopha kuyinto ukungasebenzisi hhayi obuningi, kwanele ukwelashwa lingaze futhi ngeminyaka kuyinto evamile, ngokuvamile baya kuphi. Uma namanje ukopha luningi ngempela futhi njalo, udokotela ENT angabeka a thrombosis inqubo laser semithambo noma cryotherapy (umnkantsha iphuzu okusheshayo). Imishini yesimanje like kokungenela mini cishe kobuhlungu.
Ngaphezu kwalokho, lapho isifo dystonia vegetative-semithambo (VVD) , noma ngezigaba entsha izifo, Neuro-kwegazi dystonia (NCD) ngamanzi ngezikhathi kungabonakala nasemkhakheni imithambo yegazi neuropathy, kuhlanganise ekhaleni, okuyinto engaveza opha kubo.
Kukhona izinyathelo ezilula ezimbalwa, kanjani ukuyeka ngopha emakhaleni. Okokuqala, isiguli kumelwe athathe accumbency, kodwa musa ulale nhlobo, ikhanda lakhe aphonswe emuva. Kulokhu, igazi eligeleza phansi emuva emphinjeni ungase uthole uqhoqhoqho. On the ekhaleni kubalulekile nibeke cindezela abandayo. Uma nomongozima ebusika, kungenzeka ukwenza iqhwa, emva evala ngendwangu elincanyana. Ukusiza ngokushesha ukumisa ngopha emakhaleni kukhona izingcezu ezincane oblong ka ngebhandeshi, eligoqiwe turundy futhi ofakwe ikhambi esekelwe ekhaleni vasoconstrictor lehla. Basuke busuka amavesi acinene, ngemva kwalokho-ke kuyadingeka ukuba ngobumnene ngawakhamela ezinhlangothini ekhaleni futhi ulinde imizuzu 2-3.
Uma umongozima luningi nokuphikelelayo, okwenzeka njalo, lapha ukuze uthole ukuthi kungani kukhona ngopha emakhaleni, kubalulekile ukwenza luhlolo ephelele. Ngokuyinhloko, lokhu kusebenza ifomula obomvu kanye amangqamuzana amhlophe egazi, njengoba nabo bangase DEBUT thrombocytopenia futhi wegazi (wegazi).
Umbandamu kubantu: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ithambo Frontal: anatomy pathology
Inkukhu okumnandi kanye namanzi ku-microwave: iresiphi
Kuvele iholide ngiyilibale Barcelona
Yini ongayenza ukwakha "Maynkraft"? Minecraft: iseluleko, imiyalelo
Igama Norwegian: amaqiniso athakazelisayo
Amaphilisi antipyretic Ngempumelelo
Kara Delevin: tattoo kungenzeki okuningi!